निर्मलाका बुबा भेट्न डा. भट्टराई शिक्षण अस्पतालमा - Everest Dainik - News from Nepal
निर्मलाका बुबा भेट्न डा. भट्टराई शिक्षण अस्पतालमा
काठमाडौं, मंसिर १० । नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई निर्मलाका बुबा यज्ञराजलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पुगेका छन् ।
डा. भट्टराई पत्नी हिसिला यमीसहित उपचार गराइरहेका यज्ञराजलाई भेट्न अस्पताल पुगेका हुन् । त्यसक्रममा उनले पन्तको स्वास्थ्यको जानकारी लिएका थिए।
भट्टराईले आफुहरु निर्मलाको न्यायको निम्ति लडिरहेको निर्मलाका बुबालाई बताए । छोरीको बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई कारबाही माग गर्दै धर्नामा बसिरहेका निर्मलाका बुबा यज्ञराजको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उपचारका लागि आइतबार काठमाडौं ल्याइएको थियो।
एकोहोरो बोलेको बोल्यै गर्ने र आफू के बोले भन्ने थाहा नपाउने जस्ता असामान्य व्यबहार देखाएपछि उनलाई उपचारको लागि काठमाडौं ल्याइएको हो ।
दुई हप्तादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर अगाडि उनी न्याय माग्दै धर्नामा बसेका थिए। गत साउन १० मा छोरी निर्मला हराएदेखि न्यायको लागि उनी संघर्षरत छन् ।
साउन ११ मा छोरीको बलात्कार र हत्याभएको पीडामा रहेका यज्ञराज दोषीको पहिचान र कारबाहीको माग गर्दै कञ्चनपुरदेखि काठमाडौसम्म आएर हार गुहार गरे। तर हत्या भएको ४ महिना पुग्नलाग्दा पनि प्रहरीले अपराधी पहिचानसमेत गर्न असफल भइरहेको छ।